Somaliland oo ogolaatay in Baasaboor la’aan laga dhoofo Haregysa – Somali Top News
Wararka laga helayo Somaliland ayaa sheegaya in dib u aqbashay Warqada Go-home oo ay hore u joojisey, taasi oo la goosan jiray marka la tagayo Magaalada Muqdisho.
Somaliland ayaa bishii April ee sanadkii hore joojisey in bilaa Baasaboor ay kaga dhoofan garoonkeeda Cigaal International dadyowga ku wajahan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Go’aankan ay Somaliland dib ugu aqbashay in Warqada Go-home ay jartaan dadweynaha u dhoofaya Muqdisho, ayaa loo sababeynaya in hoos u dhac weyn ku yimid garoonka diyaaradaha ee Cigaal International, mudadii ay joojiyen in bilaa Baasaboor lagaga dhoofo.
Ilaa iyo hadda, weli war rasmi ah kama soo bixin Xukuumada Somaliland, taasi oo ay ku shaacineyso inay aqbashay warqadaasi [Go-Home], balse saraakiil katirsan madaarka Hargeysa ayaa xaqiijiyay in dib loo soo celiyay in bilaa Baasaboor loogu duuli karo magaalada Muqdisho.
← Koox hubeysan oo Dad gaari saarnaa xalay ku dishay deegaanka Ceelasha Biyaha
Puntland oo mamnuucday ka ganacsiga hubka iyo agabka ciidanka →
Dhalinyaro U Dhashay Dalka Kenya Oo Ku Biiray Ururka Al Shabaab
Mid kamid ah ergadii xildhibaanada soo dooratay oo Muqdisho lagu dilay